Pineapple (နာနတ်သီး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Pineapple (နာနတ်သီး)
Pineapple (နာနတ်သီး) ကဘာလဲ။
နာနတ်သီး ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နာနတ်သီးကို ကပ်ပါးပိုး၊ သန်ကောင်များ နှိမ်နင်းရန်အတွက်အသုံးပြုပြီး အစာအိမ်ပြဿနာများကို သက်သာစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန် နှင့် ဓမ္မတာလာစေရန် လှုံ့ဆော်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။ နာနတ်သီးမှ ရရှိသော bromelain ပရိုတင်းကို ကျန်းမာရေးဓါတ်စာအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားခြင်းကို နှောင့်ယှက်တားဆီးပြီး သွေးခဲခြင်းကိုတားကာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေ၍ အနာမှ ပျက်စီးတစ်ရှူးများ ဖယ်ရှားရန်လည်း ကူညီပါသည်။
နာနတ်သီးကို အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် ညွှန်ကောင်းညွှန်နိုင်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်လေ့လာချက်များအရ နာနတ်သီးမှ ရရှိသော သဘာဝကုန်ကြမ်း bromelain ပရိုတင်းသည် ကုထုံးများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အထောက်အကူပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရ bromelain ကို မီးလောင်နာများ ဆဲလ်သေများ ဖယ်ရှားရန်နှင့် အရောင်ကျစေရန် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဖက်ဝင်အပင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
နာနတ်သီး အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင့်မှာ အောက်ပါအချက်များရှိနေလျှင် သင့်ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် (သို့) သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
သင့်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (သို့) နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေလျှင် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ကလေးရှိနေလျှင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသော ဆေးဝါးများကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
သင်သည် ဆေးဆိုင်မှ မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသောက်သုံးနေသော ဆေးများအပြင် အခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးနေလျှင်။
နာနတ်သီးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် (သို့) အခြားဆေးဝါးများ၊ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်များနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် (ဥပမာ- ပျားရည်၊ သံလွင်အပင်မှ ဝတ်မှုန်၊ တရုတ်နံနံကြီး ၊ ကျောက်ပန်းပင် ဝတ်မှုန် ၊ သင်္ဘောသီးတွင်ပါသော papain အင်ဇိုင်း ၊ bromelain )
သင့်မှာ အခြား ကျန်းမာရေးပြဿနာ ၊ ရောဂါများရှိလျှင်
သင့်မှာ အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့ အခြားအရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်အတွက် လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေဟာ ဆေးဝါးများလောက်တော့ မများပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ ပိုမိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ သူ့ကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် မသုံးခင်မှာ အကျိုးကျေးဇူးက ဆိုးကျိုးထက် ပိုများဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုပြီးသိရအောင် သဘာဝဆေးဘက်ဝင် အပင်များ အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
နာနတ်သီး က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်တို့မှာ နာနတ်သီးရဲ့ စိတ်ချဘေးကင်းမှု နဲ့အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားမှု အလုံအလောက်မရှိသေးပါ။ ရှေးယခင်က နာနတ်သီးကို ရာသီလာရန် နှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာတွင် လှုံ့ဆော်ဖို့ အသုံးပြုခဲ့မှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အထောက်အထား အလုံအလောက်မရှိပါ။
နာနတ်သီး ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဖြစ်နိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း ၊ ရာသီသွေးဆင်းများခြင်း ၊ ပျို့ခြင်း ၊ အရေပြားအနီကွက်ထခြင်း ၊ အန်ခြင်း
အလွန်အကျွံသုံးစွဲပါက ပါးစပ်နှင့် ပါးများ ရောင်ရမ်းခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရပုံမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ မပါဝင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိရင် အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
နာနတ်သီး ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
နာနတ်သီးဓါတ်စာသည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော ဆေးဝါးများ (သို့) ခံစားနေရသော ရောဂါအခြေအနေများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် (သို့) သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
နာနတ်သီး အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
နာနတ်သီး နှစ်စိတ်တွင် ascorbic acid (ဗီတာမင် စီ) ခန့်မှန်းခြေ 100mg ပါဝင်ပါတယ်။ bromelain ပုံမှန်ဆေးပမာဏ သည် 40 mg ကို နေ့စဉ် တစ်နေ့ သုံးကြိမ် (သို့) လေးကြိမ်ဖြစ်သည်။
နာနတ်သီးဓါတ်စာ ဆေးပမာဏသည် လူနာတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်အတွက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏသည် အသက်အရွယ် ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အခြား အကြောင်းရင်းများစွာအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ကိုယ်သောက်သင့်တဲ့ ပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
နာနတ်သီး က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
နာနတ်သီး ဓါတ်စာ ကို အောက်ပါပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အရည်၊ ဆေးပြား ၊ ဆေးတောင့်
ထုတ်ကုန်အများစုတွင် bromelain 500mg ပါရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများက ဆေးပမာဏကို နေ့စဉ် 500mg မှ 1000mg အထိ အကြံပြုထားပါသည်။
Pineapple. http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/ananas-comosus-pineapple. Accessed November 21, 2016
Pineapple. https://www.drugs.com/npc/pineapple.html. Accessed November 21, 2016